यसै साता चारवटा क्षेप्यास्त्रमार्फतअमेरिकामाथि हमला गर्ने उत्तर कोरियाको यस्तो छ तयारी.. – Nepal's Digital Newspaper
यसै साता चारवटा क्षेप्यास्त्रमार्फतअमेरिकामाथि हमला गर्ने उत्तर कोरियाको यस्तो छ तयारी..
August 11, 2017 August 11, 2017 nepsnews0Comments
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव चुलिइरहेकै वेला उत्तर कोरियाले प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी भूभाग गुआमनजिक चारवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने योजना बताएको छ । गुआममा अगस्टको यसै साता चारवटा क्षेप्यास्त्रमार्फत हमला गर्ने तयारी गरेको उत्तर कोरियाको समाचार संस्था केसिएनएले बिहीबार जनाएको छ ।
ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट प्योङयाङले अमेरिका आक्रमणको मिति नै तोकेको हो । बुधबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्योङयाङले कहिल्यै नदेखेको आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पको अभिव्यक्ति वाहियात भएको उत्तर कोरियाले टिप्प्णी गरेको छ । ‘ट्रम्पसँग वार्ताको सम्भावना छैन र अमेरिकालाई सैन्य बलले मात्र ठेगान लगाउन सकिन्छ,’ उत्तर कोरियाले भनेको छ । उत्तर कोरियाको चेतावनी सांकेतिक भएको र उसले गर्ने सम्भावित हमला कोरियाली शासकका लागि नै आत्मघाती हुने केही विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबारसम्म यहाँको जनजीवन सामान्य थियो । एसियाली मुलुकबाट घुम्न गएका जापानी र दक्षिण कोरियाली नागरिकहरू गुआमका विमानस्थलमा उत्रिरहेका छन् । रिसोर्टहरूमा कोठा पाउन अझै पनि मुस्किल छ । जुलाई महिनामा यो वर्षकै सबैभन्दा पर्यटक गुआम आएका थिए । ‘ग्राउन्ड जिरोमा स्वागत छ,’ उत्तर कोरियाको सम्भावित हमलाको हल्लाप्रति इंगित गर्दै एक भन्सार अधिकारीले गुआमको विमानस्थलबाट उत्रेका केही पर्यटकलाई बिहीबार भने । यो समाचार हामीले नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरेका हौ|
← सुष्मा स्वराज नेपाल आएकै बेला भारतविरुद्ध केपी ओलीले लिए यस्तो अर्को बोल्ड निर्णय !
व्यवसायीसामु झुक्यो आयल निगम, यसरि क्षतिपूर्ति बढाइयो….. →
आफैले बनाउदै गरेको बम विस्फोट तीस मारिए…….
August 11, 2017 nepsnews 0
आफ्नै छोरीको बलात्कार गरि हत्या: कोठामै लाश जलाएर मजाले नुहाए बाबुले
July 22, 2017 nepsnews Comments Off on आफ्नै छोरीको बलात्कार गरि हत्या: कोठामै लाश जलाएर मजाले नुहाए बाबुले
प्रदेशीका श्रीमतीहरु वा प्रेमीकाहरु अर्कै संग किन ?
July 17, 2017 nepsnews Comments Off on प्रदेशीका श्रीमतीहरु वा प्रेमीकाहरु अर्कै संग किन ?